डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध प्रचण्डले अदालतमा मुद्दा हाल्दै Canada Nepal
डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध प्रचण्डले अदालतमा मुद्दा हाल्दै
क्यानाडानेपाल आश्विन २५ २०७७
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई तीन दुई दशक राजनीतिक यात्राका सहयात्री हुन् । उनीहरुलाई एकअर्काको कमजोरी र गल्तीबारे जानकार छन् ।
दश वर्षे सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण पश्चात आफ्ना लडाकु व्यवस्थापनको सात वर्ष नेतृत्वदायीमा सँगै बसेका प्रचण्ड र भट्टराईबीच संविधान जारी भएपछि सम्बन्ध बिग्रियो । र अहिले उनीहरु फरक फरक पार्टीबाट राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
प्रचण्ड भट्टराईबारे खासै बोलेका सुनिँदैन । भट्टराई आफ्नो पार्टीमा आउने विश्वास प्रचण्डले बेला बेलामा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, भट्टराईले भने प्रचण्डमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
र यसैक्रममा बिहीबार गोखरा पालुङटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले बुढीगण्डकीको ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लगाए ।
गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रचण्ड भट्टराईप्रति आक्रोशित भएका छन् । यसअघि लगाइएका आरोपप्रति खासै वास्ता नगरेका प्रचण्ड यसपटक भने भट्टराईप्रति निकै आक्रोशित भएका छन् । आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई धक्का दिने गरी भट्टराईले लगाएको आरोपबारे प्रचण्डले न्याय खोज्ने तयारीमा पुगेका छन् ।
आफ्नो मानप्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गरी निराधार र कपोकल्पित आरोप लगाउने भट्टराईविरुद्ध प्रचण्डले मानहानिको मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने तयारीमा पुगेका छन् । यसबारे उनी छलफलमा रहेका स्रोतले जनाएको छ ।
ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको बाबुरामको आरोपप्रति सरकारको मौनता
प्रचण्डसहित तत्काली माओवादीका नेताहरुमाथि माओवादी लडाकु शिविरको चार अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबारे अनुसन्धानको मागसमेत गरिँदै आएको छ । यही बेला भट्टराईले प्रचण्डमाथि ९ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका हुन् ।
आफ्नी पत्नी हिसिला यमीमाथि लगाएको भ्रष्टाचार आरोपप्रति आक्रोशित हुँदै डा. भट्टराईले ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि नौ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका हुन् । उनले आफूसँग प्रमाण पनि रहेको जानकारी दिएका छन् ।
आश्विन २५, २०७७ आइतवार १३:३४:०५ बजे : प्रकाशित
# ९ अर्ब भ्रष्टाचार